चाइना गन क्लिनिङ एक्सेसरीज निर्माता र आपूर्तिकर्ता - रोची
घर > उत्पादनहरू > बन्दुक सफाई > बन्दूक सफाई सामान
चीनमा बनेको बन्दुक सफा गर्ने सामानहरू रोचीबाट सस्तो मूल्यमा किन्न सकिन्छ। यो एक पेशेवर उच्च गुणस्तर उत्पादन निर्माता र चीन मा कारखाना हो। हामी एक चीन कम्पनी हो जसले अनुकूलित उत्पादन सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यदि तपाइँ Pricelist र उद्धरण चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ हामीलाई सन्देश छोडेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी जति सक्दो चाँडो तपाईलाई फिर्ता गर्नेछौं।
बोर सफाईको लागि कांस्य तारहरू बन्दुक सफा गर्ने ब्रश - भारी शुल्क पीतल तारहरू। एन्टि रस्ट स्टिल स्टेम।—- प्रत्येक ब्रश व्यास सम्बन्धित बोर भित्री व्यास भन्दा ०.५-२ मिमी ठूलो हुनेछ, ताकि यसले बोरलाई राम्ररी सफा गर्न सक्छ।—— प्रत्येक ब्रशमा स्पष्ट रूपमा छापिएको क्यालिबर नम्बरसहितको ब्रश।—— नटलाई ब्रश स्टेममा कडा र बलियो थिचिएको छ। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार गरियो।
बोर सफाईको लागि कपासको तार बन्दुक सफा गर्ने मोप्स
बोर सफाईको लागि कपासका तारहरू बन्दुक सफा गर्ने मोप्स - भारी शुल्क कपास तारहरू। एन्टि रस्ट स्टिल स्टेम।—- प्रत्येक ब्रश व्यास सम्बन्धित बोर भित्री व्यास भन्दा 1-5 मिमी ठूलो हुनेछ, ताकि यसले बोरलाई राम्ररी सफा गर्न सकोस्।—- प्रत्येक ब्रश यसको क्यालिबर नम्बर ब्रसमा स्पष्ट रूपमा छापिएको छैन। नटलाई ब्रश स्टेममा कडा र बलियो थिचिएको छ। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार गरियो।
बोर सफाईको लागि नायलॉन तार बन्दुक सफाई ब्रश
बोर सफाईको लागि नायलॉन तारहरू बन्दुक सफा गर्ने ब्रश - भारी शुल्क नायलन तारहरू। एन्टि रस्ट स्टिल स्टेम।—- प्रत्येक ब्रश व्यास सम्बन्धित बोर भित्री व्यास भन्दा ०.५-३ मिमी ठूलो हुनेछ, ताकि यसले बोरलाई राम्ररी सफा गर्न सक्छ।—— प्रत्येक ब्रश यसको क्यालिबर नम्बर ब्रसमा स्पष्ट रूपमा छापिएको छैन। नटलाई ब्रश स्टेममा कडा र बलियो थिचिएको छ। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार गरियो।
बोर सफाईको लागि वसन्त ट्विस्टेड गन क्लिनिंग ब्रश
बोर क्लिनिङका लागि स्प्रिङ ट्विस्टेड गन क्लिनिङ ब्रस—उच्च गुणस्तरको वसन्त स्टेममा ट्विस्ट गरिएको छ। एन्टि रस्ट स्टिल स्टेम।—- प्रत्येक ब्रश व्यास सम्बन्धित बोर भित्री व्यास भन्दा ०.५-१.५ मिमी ठूलो हुनेछ, ताकि यसले बोरलाई राम्ररी सफा गर्न सक्छ।—— प्रत्येक ब्रश यसको क्यालिबर नम्बरको साथ ब्रसमा स्पष्ट रूपमा छापिएको छैन। — नटलाई ब्रश स्टेममा कडा र बलियो थिचिएको छ।— OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार गरियो।
बन्दुक बोर सफाई को लागी कांस्य तार जग ब्रश
गन बोर क्लिनिङका लागि ब्रोन्ज वायर्स जग ब्रस——ब्रसको स्टेमको टुप्पोमा नाइलनको झोला बलियोसँग घुमाइएको छ, ब्रसको स्टेमलाई बोर स्क्र्याच गर्न सुरक्षित गर्नुहोस्।—— जगमा प्याच राखेर, ब्रसको बडी र्‍याप गर्दा, तपाईंले जग र मोप पाउनुहुनेछ। कार्यहरू। - प्रत्येक ब्रश यसको क्यालिबर नम्बर सहितको ब्रशमा प्रिन्ट गरिएको छ स्पष्ट रूपमा छैन। - नटलाई ब्रसको स्टेममा कडा र बलियो थिचिन्छ। - ब्रासको जग भन्दा नायलनको जग राम्रो हुन्छ, जसरी काँसाले बोरलाई स्क्र्याच गर्छ, नाइलन। हुनेछैन।
कांस्य र स्टेनलेस स्टील गन च्याम्बर सफाई ब्रश
कांस्य र स्टेनलेस स्टिल गन च्याम्बर क्लिनिङ ब्रुश—- काँसाको तार र स्टेनलेस तारबाट बनेको, एन्टि-रस्ट स्टेमको साथ;—— दुई व्यासको डिजाइनले तपाईंलाई च्याम्बरलाई राम्ररी सफा गर्न मद्दत गर्छ।—— प्रत्येक ब्रसको क्याबिबर नम्बर ब्रसमा स्पष्ट रूपमा छापिएको छैन। .â— नटलाई ब्रश स्टेममा कडा र बलियो थिचिएको छ। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
ह्यान्डगन कपाल तारहरूको लागि ट्विस्ट स्टेम गन सफाई ब्रश
ह्यान्डगन हेयर वायर्सका लागि ट्विस्ट स्टेम गन क्लिनिङ ब्रस — भारी ब्रिस्टल, बलियो स्टेम; — एन्टि रस्ट स्टिल स्टेम।— औंठीसँग ह्यान्डल, हातमा आरामदायी — पिस्तौल बोरहरूको लागि पर्याप्त लम्बाइ। — OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
4-pc शटगन सफाई ब्रश सेट
4-pc शटगन क्लिनिङ ब्रस सेट — भारी ब्रिस्टलहरू, नटसँग बलियो स्टेम प्रेस। — विन्डो हेर्न मिल्ने बक्स प्याकेजले खरिदकर्ताहरूलाई भित्रका सामग्रीहरू हेर्न मद्दत गर्दछ। — एक क्यालिबर पूर्ण सफाई उपकरणहरूले भरिएको रंगीन बक्स राम्रो बिक्री हो। - प्रत्येक ब्रश क्यालिबर नम्बर नटमा स्पष्ट रूपमा छापिएको छ। प्रयोगकर्ताहरू सही आकार फेला पार्न सजिलो छ। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
डबल एन्ड युटिलिटी गन सफा गर्ने ह्यान्ड ब्रश ब्रास तारहरू
डबल एन्ड युटिलिटी गन क्लिनिङ ह्यान्ड ब्रस ब्रास तारहरू — भारी ब्रिस्टलहरू, ह्यान्डी प्लास्टिक ह्यान्डल — CLP बन्दुकको तेल वा सल्भेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्, बन्दुकको ब्रिस्टलमा बन्दुकको क्लिनर र लुब्रिकेन्ट बन्दुक मर्मतका लागि प्रयोग गर्नुहोस् — डबल-एन्ड, एउटा चौडा, एउटा साँघुरो, डिजाइन गरिएको आफ्नो हतियारको क्षेत्रमा पुग्न गाह्रो हुने ठाउँहरूमा आक्रमण गर्न — नरम सफाईको लागि नायलन तारहरू, छिटो सफा गर्नका लागि ब्रासका तारहरू।— OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
7" उपयोगिता गन सफा गर्ने ह्यान्ड ब्रश नायलन तारहरू
7" युटिलिटी गन क्लिनिङ ह्यान्ड ब्रस नायलन तारहरू — भारी ब्रिस्टलहरू, ह्यान्डी प्लाष्टिक ह्यान्डल — CLP बन्दुकको तेल वा सल्भेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्, बन्दुकको ब्रिस्टलमा बन्दुकको क्लिनर र लुब्रिकेन्ट बन्दुकको मर्मतसम्भारको लागि — सानो र छोटो ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्न र भण्डारण गर्नका लागि सुविधाजनक छन्। â— नरम सफाईको लागि नायलॉन तारहरू, द्रुत सफाईको लागि पीतल तारहरू। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
प्लास्टिक उपयोगिता बन्दुक सफाई ह्यान्ड ब्रश भारी प्लास्टिक तारहरू
प्लास्टिक युटिलिटी गन क्लिनिङ ह्यान्ड ब्रस हेभी प्लाष्टिक तारहरू — भारी ब्रिस्टलहरू, ह्यान्डी प्लास्टिक ह्यान्डल — CLP बन्दुकको तेल वा घोलक, बन्दुक क्लिनर र बन्दुकको मर्मतका लागि ब्रश ब्रिस्टलमा लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्नुहोस् — सानो र छोटो ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्न र भण्डारण गर्नका लागि सुविधाजनक छन्। â— नरम सफाईको लागि नायलॉन तारहरू, द्रुत सफाईको लागि पीतल तारहरू। - OEM र ग्राहक लोगो स्वीकार्य छन्।
स्टील ह्यान्डल उपयोगिता बन्दुक सफाई ब्रश
स्टील ह्यान्डल युटिलिटी गन क्लिनिङ ब्रस प्वालहरू, र ग्रूभहरू सफा गर्नका लागि उपयुक्त छ। कपाल ब्रिस्टलले फोहोर हटाउन सक्छ, बन्दुकको सतहलाई चोट पुर्याउँदैन।
चीनमा बनेको अनुकूलित बन्दूक सफाई सामान कम मूल्य वा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। हाम्रा उत्पादनहरू CE प्रमाणित छन्। थप रूपमा, हाम्रा उत्पादनहरू टिकाऊ र सजीलो मर्मत योग्य छन्। Rotchi चीन मा एक प्रसिद्ध बन्दूक सफाई सामान निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो। हाम्रा उत्पादनहरू डिजाइनमा फेसन मात्र होइन, उत्कृष्ट र फेन्सी पनि छन्। यसबाहेक, हामीसँग हाम्रा आफ्नै ब्रान्डहरू छन् र हामी बल्क प्याकेजिङलाई पनि समर्थन गर्छौं। यदि मैले अहिले अर्डर गरे भने, के तपाईंसँग स्टकमा छ? अवश्य! यदि आवश्यक छ भने, हामी नि: शुल्क नमूनाहरू मात्र होइन मूल्य सूची र उद्धरणहरू पनि प्रदान गर्नेछौं। यदि म होलसेल गर्न चाहन्छु भने, तपाईले मलाई के मूल्य दिनुहुनेछ? यदि तपाईंको थोक मात्रा ठूलो छ भने, हामी कारखाना मूल्य प्रदान गर्न सक्छौं। नवीनतम बिक्री, नयाँ, उन्नत, छुट र उच्च गुणस्तर बन्दूक सफाई सामान किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा आउन तपाईंलाई स्वागत छ। तपाईं हामीबाट छुट उत्पादन किन्न आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं, यदि तपाई थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले हामीलाई अहिले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई समयमै जवाफ दिनेछौं!